हिरोहिरोइन लुकाएर ऋषिराजको ‘चुरीफुरी’FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्मी फण्डा । हाँस्य टेलिश्रृंंखला तथा वेवसिरिजका चर्चित हाँस्य कलाकारहरुलाई लिएर निर्देशक ऋषिराज आचार्यले नयाँ फिल्म ‘चुरीफुरी’ को सुटिङ गरिरहेका छन् । केही दिन अघिदेखि काठमाडौका बिभिन्न स्थानमा सुटिङ भइरहेको फिल्मको मुख्य हिरो–हिरोइन को हुन् ? त्यो भने गोप्य राखिएको छ ।
आरबि मुभीजको ब्यानरमा निर्देशक आचार्य स्वयम् र रिना ढकाल निर्माता रहेको फिल्मको सहनिर्मातामा बिमला भुसाल,राजेन्द्र खाती र शिब थापा छन् । निर्देशक आचार्यले ‘चुरीफुरी’ लाई मनोरञ्जनको नौलो प्याकेजका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् ।
‘अहिले बिश्व नै कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण असहज जीवन जिउन बाध्य छ । यो परिस्थितिबाट उत्पन्न दिक्दारीलाई ‘चुरीफुरी’ ले भरमार रिफ्रेस गराउने छ,’ निर्देशक आचार्य भन्छन्, ‘एकदम समसामयिक बिषयमा उत्कृष्ट मनोरञ्जन दिने कोसिस गरेका छौ ।’
राहुल राईको छायांकन, भिमफेदी गाइजको कोरियोग्राफी,बिजय आचार्यको कला निर्देशन र दीपक शर्माको संगीत रहेको फिल्मका गीतमा समीर आचार्य,बिश्व नेपाली र बेनिशा पौडेलको स्वर छ । सुटिङ समापनसँगै हिरोहिरोइनलगायत फिल्म बारे बिस्तृत जानकारी दिइने तयारी निर्माण पक्षको छ ।